कोरोना उपचारका लागि २० प्रतिशत बेड छुट्याउन यसकारण तयार छैनन् निजी अस्पताल :: विवेक राई :: Setopati
कोरोना उपचारका लागि २० प्रतिशत बेड छुट्याउन यसकारण तयार छैनन् निजी अस्पताल
सौजन्य : रविन राज निरौला
निजी अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि २० प्रतिशत बेड छुट्याउन नसकिने जनाएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको भन्दै निजी अस्पतालहरूलाई पनि उपचारका लागि तयार रहन भन्दै २० प्रतिशत बेड छुट्याउन निर्देशन दिएको थियो। तर निजी अस्पतालहरूले भने सरकारको उक्त निर्णय अव्यवहारिक रहेको औंल्याएका छन्।
निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन 'अफिन' का महासचिव हेमराज दाहालले भने, 'निजी अस्पतालहरू कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न तयार छ तर सरकारको यो निर्णय व्यवहारिक छैन।'
उनले सबै अस्पताललाई एकैठाउँ राखेर कोभिडका बिरामी उपचार गर्न बेड छुट्याउन लगाउन नहुने बताए।
सरकारले आवश्यक अध्ययन गरेर र जोखिमलाई समेत मध्यनजर गरेर निर्णय लिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
'कुनै अस्पताल मुटु, किड्नीको मात्र उपचार गर्ने पनि छन्। अनि त्यस्तो अस्पतालमा कोभिडको बिरामीलाई पनि भर्ना गरे के हुन्छ? त्यसैले सबै अस्पतालले कोभिड भर्ना गरेर हुँदैन। हामीमध्ये कोही तयार छ भने त्यस्ता अस्पताललाई प्रयोग गर्ने हो,' उनले भने।
कतिपय अस्पतालहरूको संरचना साँघुरो रहेको भन्दै यस्ता सामान्य कुराहरूलाई पनि ख्याल नगरी सरकारले अपरिपक्व निर्णय लिएको उनको बुझाइ छ।
आफूहरूले अस्पतालको सूचीसहित एक हजार जना कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न सक्छौं भनेर लिस्ट पठाएको भए पनि सरकारले त्यसमा चासो नदिएको उनले जनाए।
'हामीले एक हजार जनाको उपचार गर्न सकिन्छ भनेर लिस्ट बुझाएका छौं। किस्ट, गणेशमान, सर्वाङ्ग अस्पतालहरू संक्रमितको उपचार गर्न तयार छन्। सरकारले पहिले यस्ता कुरालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्यो नि,' दाहालले भने।
मन्त्रालयले निजी अस्पतालहरूमा संक्रमितको उपचार गर्ने निर्णय लिँदा पनि आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरेको उनी बताउँछन्।
अफिनकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार थापा पनि कोभिड र ननकोभिड बिरामीलाई एकैठाउँ राखेर उपचार गर्न नहुने तर्क गर्छन्।
'जुन अस्पतालहरूले हामी तयारी छौं भनेर भन्छन् त्यस्तालाई मात्र उपचार गर्न दिनुपर्छ। नत्र एकैठाउँ राखेर उपचार गर्ने हो भने जोखिम बढ्छ र स्थिति भद्रगोल हुन्छ,' उनले भने।
सरकारले दिएको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन हुन नसक्ने आशय पोख्दै उनले यसबारे आफूहरूसँग कुनै सल्लाह नभएको बताए।
अहिले निजी अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमितका बिरामीहरूलाई सरकारले तोकेको हब अस्पतालहरूमा रिफर गर्दै आएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा पनि तीन वटा सरकारी अस्पतालहरू कोरोना संक्रमितको उपचाराका लागि डेडिकेटेट अस्पताल छन्। जसमा टेकु, पाटन र एपिएफ अस्पताल छन्।
पछिल्लो समय उपत्यकामा पनि संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेपछि ती अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढेको छ।
टेकु अस्पतालले त संक्रमितलाई ठाउँ नभएको भन्दै अन्य अस्पतालमा रिफर गर्ने गरेको छ। यहीँ स्थितिलाई मध्यनजर गरेर सरकारले निजी अस्पतालहरूलाई पनि उपचारको लागि तयार रहन निर्देशन दिएको हो। जस अनुसार सबै निजी अस्पतालहरूलाई आफ्नो बेड क्षमताको २० प्रतिशत बेड कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि छुट्याउन भनिएको छ।
तर आवश्यक तयारी र छलफल नगरी निर्णय गरिएको भन्दै निजी अस्पतालहरू यसका लागि आनाकानी गरिरहेका छन्।
विज्ञहरूले समेत एउटै अस्पतालमा कोभिड र ननकोभिड बिरामीको उपचार गर्ने कुरा व्यवहारिक नभएको बताएका छन्।
संक्रमण रोग विशेषज्ञ डा. शेर बहादुर पुनले भने, 'त्यो गर्दा जोखिम रहन्छ। सैद्धान्तिक ज्ञान भए पनि अन्य अस्पतालहरूलाई व्यवहारिक पाटो समाल्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले हामी चुक्न पनि सक्छौं।'
उनले कोभिड र ननकोभिड बिरामीको एउटै अस्पतालमा उपचार गर्दा पहिलो कुरा त्यो अस्पतालको संरचना कस्तो छ भनेर यकिन गर्न महत्वपूर्ण हुने बताए।
उनले भने, 'भोलि गएर कोभिड र ननकोभिडका बिरामीले एउटै ढोका प्रयोग गर्ने स्थित आयो भने दीर्घ रोगी मानिसहरूलाई सबैभन्दा गाह्रो हुन्छ। त्यसैले अमेरिका, युरोपेली देशहरूमा पनि रंगशाला र खुला स्थानहरूमा अस्थायी संरचना खडा गरेर संक्रमितको उपचार गरिएको छ।'
सरकारले अस्पतालको क्षमतले धान्न नसक्ने स्थिति आएर यो कदम उठाएको भए पनि अझै अन्य विकल्प नै रोज्दा उपयुक्त हुने पुनको तर्क छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ १, २०७७, ०७:२९:००
एमालेनिकट युवा संघमा विवाद, एक पक्षीय ढंगले चले समानान्तर कमिटी बनाउने चेतावनी
नेपाल प्रहरीमा तीन एआइजी दरबन्दी थप्ने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति
नेपालमा हालसम्मकै सर्वाधिक संक्रमित
ललितपुरमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने
तोकिएको समयमा हाजिर हुँदैनन् कर्मचारी, ७३२ लाई कारबाही सिफारिस
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई कोरोना
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री राउतको निजी निवासमा ढुंगा हानेको आरोपमा एक पक्राउ